Madaxweynah Somaliland Muuse Bixi oo la kulmay Madaxweynaha Jabuuti – Radio Daljir
Madaxweynah Somaliland Muuse Bixi oo la kulmay Madaxweynaha Jabuuti
Janaayo 7, 2018 12:20 g 0
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku sugan dalka Jabuuti ayaa xalay kulamo la qaatay Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Jabuuti.
Waxaa uu kulan la qaatay Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil cumar Geelle oo ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin Xiriirka, Ganacsiga iyo dhanka Amniga. Sidoo kale Wasiirradda iyo taliyeyaashii ciidan ee la socday ayaa dhankooda la kulmay Wasiiro iyo taliyeyaal ciidan.
Madaxweynaha Somaliland ayaa booqashadii ugu horreyay tan iyo markii la doortay ku tagay dalka Jabuuti. Safarka madaxweynaha uu joogo dalka Jabuuti ayaa qaadan doona maalmo kooban, waxaana marti-qaad rasmi ah u soo diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, Mudane Ismaaciil Cumar Geelle.
Tahribiyaal Somaliyeed oo Xeebaha Liibya Dooni kula dagtay
Ciidamadda Dowladda iyo Alshabaab oo ku dagaalamay Balcad